एमाले महासचिवमा विष्णु कि शंकर ? : RajdhaniDaily.com sharethis
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को १०औं महाधिवेशन दुई दिन मात्र बाँकी छ । यतिबेला पार्टीको प्रभावशाली पद हत्याउन नेताहरू आन्तरिक रणनीतिमा जुटेका छन् ।
महाधिवेशन नजिकिएसँगै पार्टीको प्रभावशाली पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदका लागि नेताहरू रणनीतिमा जुटेका छन् । १०औं महाधिवेशनमा महासचिवका पाँच जना दाबेदार देखिएका छन् ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनः
उता, अध्यक्षपछिको प्रभावशाली पद महासचिव को बन्छ ? भन्ने कार्यकर्तामा कौतुहलता बढेको छ । १०औं महाधिवेशनमा महासचिव बन्ने दौडमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत चर्चामा छन् ।
१० भाइ समूहबाट उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि भुसाल अहिले अलमलमा परेका हुन् । एमालेभित्र वैचारिक नेताका रूपमा चिनिने भुसाल लामो समय नेपाल समूहमा रहेका काम गरेका थिए ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनमा मंसिर १०, ११ र १२ गते चितवनमा हँुदै छ । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको नयाँ विधानको व्यवस्थाअनुसार १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित पाँच जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सात जना सचिव गरी १५ जना पदाधिकारीसहितको २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नेछ ।
नेपालकै ठूलाे स्याउ फर्म हेर्न राष्ट्रपति भण्डारी मनाङमा
कोरोना राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा खर्च भएको हिसाब दिन मान्दैन इटहरी उपमहानगर